Triton Kupona: chiito chitsva uye zita rekupona richauya kuLinux | Kubva kuLinux
Isaac | | GNU / Linux, Mitambo
Triton Kupona kupona uye chiito zita, mutambo wevhidhiyo uyo vateveri vemusoro uyu vachanyatsoda. Zvakare, sezviri pachena, ichauya yeGNU / Linux. Iwe uchafanirwa kuvaka hwaro uye kuvadzivirira, pamusoro pekugadzirisa zvimwe zviwanikwa. Mafungu evavengi ayo achakurwisa anozokuomesera, uye iwe zvakare uchave neyako nguva sisitimu yekuchinja masikati neusiku, pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze kuti zvipe chokwadi chaicho.
Iwe unenge uine zvombo zvakasiyana, mota, zvisikwa zvakasiyana, uye unogona kurima miriwo yakasiyana papurazi. Simba manejimendi rakakoshawo kuchengetedza iyo koloni, pamwe nekuwana zvicherwa nezvimwe zviwanikwa kubva kune zvakasikwa. Zvese zvinotaridzika zvakanaka, pamutengo unosvika madhora 14.99. Iwe unogona ikozvino kuiwedzera kune yekuda rondedzero muValve chitoro, Steam kana uchida, kunyangwe panguva ino iri yeWindows.
Asi zvinoita sekunge iyo vhezheni ye Linux uye yeMacSemazuva ese, anotangwa zvishoma mushure meWindows, sezvo iri chikuva chine vashandisi vakawanda uye chinonyanya kunakidza mune zvehupfumi. Nenzira, vagadziri vayo vanoita kunge vari kushanda kune mamwe madoko kune mamwe mapuratifomu, akadai seXbox, Nitendo switch, uye PlasyStation vhidhiyo inonyaradza ...
Kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda, iwe unogona kuona zvimwe zvakawanda mune izvi Steam chitoro chinongedzo. Izvo zvinogara zvichishamisa zvinonakidza kuti zvishoma nezvishoma runyorwa rwemazita epuratifomu yedu ari kuwedzera. zviripo kare kupfuura 5000 kubvira gore rapfuura, uye zvishoma nezvishoma zvicharamba zvichikura. Zvinotaridza senge zvisingafungidzike kwandiri makore mashoma apfuura, apo huwandu hwezita reLinux hwaive zero, kunze kweHalf Life uye Unreal Tournament, paive nemitambo mishoma yakakosha yemavhidhiyo yeLinux ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Triton Kupona: Nyowani Yekuita Kupona Musoro Kuuya KweLinux
GL-Z, chishandiso chekutarisa Vulkan uye OpenGL